NgoMeyi 2021-Funda ukuRhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum-nge-31 kaMeyi
I-Ethereum Classic (ETC) nezinye i-cryptocurrensets ziye zanexabiso elibi kakhulu kwezi veki zimbalwa zidlulileyo kulandela isenzo sokuqhekeka ngurhulumente wase-China kwindawo ye-crypto kunye nesigqibo sikaTesla sokuyeka ukwamkela iBitcoin njengentlawulo.
Okwangoku, abasemagunyeni baseMelika bathatha indawo ebonakalayo yokulawula ishishini le-cryptocurrency njengoko iinkxalabo zokukhusela abatyali zimali zikhula.
Isikhundla sikarhulumente esitsha kukuqhekeka kulawulo lukaTrump, olwalululwalamano oluhle kushishino lwe-crypto. Nangona kunjalo, ezi nzame zinokuthatha ixesha ukuvelisa inkqubela phambili ebonakalayo njengoko abalawuli base-US begunyazisa ukuba ngubani onegunya elisemthethweni lokongamela eli shishini linokuguquguquka.
Kudliwanondlebe lwakutsha nje ne-Financial Times, uMichael Hsu, umphathi obambeleyo wezezimali, uqaphele ukuba unethemba lokuba amagosa ase-US asebenza ngokudibeneyo ekuphuhliseni "Umjikelezo olawulayo" Imali yeemali zedijithali.
"Ngokwenyani kulungelelaniswa kwiiarhente zonke," utshilo uHsu, ophethe i-Ofisi yeSebe lezeMali elongamela iibhanki zikazwelonke. "Ngokuthetha nabanye oontanga bam, kukho umdla wokuququzelela uninzi lwezi zinto."
I-US iququzelele intlanganiso ye-inter-agency crypto "Iqela le-sprint," ebandakanya iofisi yoMlawuli weeMali, iFederal Reserve, kunye neFederal Deposit Insurance Corporation.
Ngokuka-Hsu, injongo yeli qela kuku “Beka izimvo phambi kwee-arhente ukuba ziqwalasele” njengoko bezama ukugcina kunye nomzi mveliso okhulayo we-crypto.
Amanqanaba aphambili e-Ethereum aBalulekileyo okuBukela-nge-31 kaMeyi
Emva kokuphuma kwinzala yayo yamva nje kwintlekele yangaphambilini yemarike, i-Ethereum Classic yawela kwindibaniselwano ende phakathi kwe- $ 80 kunye ne- $ 70. Nangona kunjalo, emva kweentsuku ezimbalwa, i-ETC yawela ngaphantsi koluhlu lokudibanisa kwaye yangena kolunye udidi lokudibanisa phakathi kwe- $ 70 kunye ne- $ 60.
I-cryptocurrency ijongene nomsebenzi wokunyuka ubuye ngaphezulu kwe-200 SMA kwi- $ 68.50 kwiiyure ezizayo. Ngelixa sibona i-rally ethobekileyo evela kwikhefu elingaphezulu komgca we-200 SMA, ukusilela ukwaphula kuya kuthumela i-ETC kwiindawo zokudibanisa ngakumbi kunye neendawo zokudibanisa ezisezantsi.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 70.00, i- $ 75.00, kunye ne- $ 80.00, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 65.00, $ 60.00, kunye ne- $ 55.00.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.62 zezigidi
Imali yeemali ze-Ethereum $ 7.91 billion
I-Ethereum Classic yolawulo: 0.49%
tags Cryptocurrency, ETC, I-ETHEREUM YAKUDALA, iindaba
I-Bitcoin Cash (BCH) ibuyisa ngaphezulu kwe- $ 500 yeNkxaso, iphinda iqhubeke ngokuKhangela
I-BCH iyachacha kwi-downtrend engaphezulu kwe- $ 467
I-altcoin iphinda iqale ngokutsha
Ixabiso langoku: $ 696.72
Intengo yeNtengiso: $ 14,604,040,003
Umthamo wokuThengisa: $ 14,604,040,003
Utshintsho lwexabiso le-Bitcoin Cash (BCH) ngoMeyi 31, 2021
NgoMeyi 23, I-Bitcoin Cash yawela kwizantsi i-467 yeedola njengoko iinkunzi zeenkomo zazithenga iidiphu. I-altcoin ibuyile kwi-downtrend yayo kodwa ukunyuka okunyukayo kugxilwe kwi-800 ephezulu yeedola. Ukusukela nge-24 kaMeyi, i-BCH inyanzelwe ukuba ihambe ecaleni kwecala elingaphantsi kwe- $ 800 yokumelana. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukunganyangeki kwi-800, ingqekembe iya kuthi rally ukuya kwi-1,000, 800 ephezulu. Okwangoku, i-BCH iyenyuka ukuphinda iphinde ibuye kwakhona ukumelana ne- $ XNUMX ephezulu.
Ingqekembe inyuke yaya kwinqanaba lama-42 le-Relative Strength Index ixesha le-14.I-crypto ikwindawo esezantsi kunye nangaphantsi komgangatho osembindini wama-50.
Itshati yeYure ye-BCH / USD -4
I-Bitcoin Cash ifunyenwe kwimarike yebhere. I-uptrend ijongene nenkcaso enkulu kwi- $ 800 ephezulu. Ngeli xesha, ngoMeyi 24 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le- $ 973. 54
Ukuguquguquka kwemihla ngemihla kwe-EURUSD kuyaqhubeka ngokujikeleza i-1.2200 phakathi kweholide yeBhanki yaseMelika
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-ngoMeyi 31
NgoMvulo, urhwebo lwe-EURUSD kuluhlu olulinganiselweyo njengoko ukungazinzi kwemihla ngemihla kuyaqhubeka malunga ne-1.2200. Ngaphandle kozinzo olubanzi-olusekwe kwiimarike zehlabathi kunye nokusilela kokungazinzi okulandelayo Ukungasebenzi kweimarike zaseMelika ngenxa yempelaveki yoSuku lweSikhumbuzo, ukurhweba ngemali enye ngaphandle kwesikhokelo esicacileyo.
Amanqanaba okumelana: 1.2413, 1.2350, 1.2266
Amanqanaba enkxaso: 1.2150, 1.2100, 1.2050
Kwiveki ephelileyo, i-EURUSD ifikelele kwinqanaba elitsha lenyanga ezi-4 ezikufutshane ne-1.2270 ngaphambi kokuba abathengisi bayirhuqele kwimimandla ye-1.2130, apho bekukho ukhuphiswano oluqinileyo ukuza kuthi ga ngoku. Ukuza kuthi ga ngoku, esi sibini sinyuke nge-0.07 yeepesenti kwi-1.2200, ngala manqanaba alandelayo okuxhathisa eyi-1.2266 (ngenyanga ephezulu ngoMeyi 25), inqanaba le-1.2300, kwaye okokugqibela yi-1.2349. (2021 ephezulu ngoJanuwari 6).
Ikhefu elingaphantsi kwe-1.2132 (ngoMeyi ophantsi we-28) liya kujolisa kwi-1.2051 iphantsi ngoMeyi 13 kwindlela eya kwi-1.1985 kwelinye icala. Ngengqondo ebanzi, i-EURUSD kulindeleke ukuba igcine i-bias yayo ye-bullish okoko ithengisa ngaphezulu kwe-5 kaMeyi kwi-1.1985 ehleli kwindibano yomgca wenkxaso ethe tyaba kunye nokunyuka kwendlela.
I-EURUSD ye-intraday bias itshintshele ekungathathi hlangothi, kunye neeyure ezi-4 zeeNdawo zoMbane eziMandla ezisele zihleli ngaphezulu komda ophakathi. Kwicala elisezantsi, ikhefu eliqinileyo lenqanaba lenkxaso le-1.1985 kufuneka limisele ukuba ipateni yokudibanisa eqale kwi-1.2348 ingene kwisigaba sayo sesithathu.
Ixabiso liya kuthi emva koko lihle kakhulu, libuyela kwinqanaba lenkxaso le-1.1703. Ngaphezulu kwe-1.2266, nangona kunjalo, i-rally esuka kwi-1.1703 iya kuphinda iqale, kunye nokuphindaphinda kwe-1.2349 ephezulu. I-bias yexesha elifutshane i-bearish, nangona nakuphi na ukwehla akunakulindeleka ukuba kufikelele kwindawo ephambili yenkxaso kufutshane ne-1.1850. Ngexesha elifutshane, uMeyi ophantsi kufutshane ne-1.1985 sele inqanaba lenkxaso eqinileyo.
Ukuxhonywa kwe-EURUSD kukuphakama kwangoLwesihlanu
Inkxaso ephambili: 1.2180
Ukuchasana okuphambili: 1.22 - 1.2235 - 1.2260
I-EURUSD ityikitywe ngolwesiHlanu odlulileyo kwi-USD ekhawulezileyo kakhulu ngaphambi kokuba i-NY ivulelwe ukuvavanya ulwakhiwo lwexesha elide kunye neveki edlulileyo.
I-USD ihlala isezantsi kakhulu phantsi koxinzelelo kwaye ngolwesiHlanu wokugqibela i-DXY yaphuma kwindawo enkulu yokuchasana yaza yaprinta ikhandlela elikhulu lemihla ngemihla lokuvala ikhefu libuyele ngaphakathi ngaphakathi kubume bexesha eliphakathi.
Sijonge ukuqhubela phambili kokunyusa amandla apha kodwa ukuze ukuseta kwethu kube kokusebenzayo kufuneka ixabiso lokuphula imigangatho yangoLwesihlanu. Ukuba le meko idlalwe sinokuba sijonge ukuphindaphinda okuphezulu kwiveki ephelileyo kwinqanaba le-1.2260.
Joyina wethu Isiteshi seVIP APHA
Ixabiso le-Bitcoin SV lilindele ukuphuma
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin SV-Meyi 31
Xa iinkunzi zenkomo zonyusa uxinzelelo lwazo, inqanaba lokumelana ne- $ 171 linokungena kwaye kunokubakho ukonyuka ukuya kuthi ga kwixabiso leedola le-198 kunye ne-217 lamaxabiso. Ukuba inqanaba lenkxaso le- $ 152 libambile, ukushukuma okuqhubekayo kunokuqhubeka, nangona kunjalo, inqanaba lenkxaso elingaphantsi kwexabiso langoku lifunyenwe kwi-152, $ 134, nakwi-115 yeedola.
Amanqanaba okumelana: $ 171, $ 198, $ 217
Amanqanaba enkxaso: $ 152, $ 134, $ 115
I-Bitcoin SV isukela kwitshathi yemihla ngemihla. Umkhwa we-bearish oqale nge-12 kaMeyi ngokwenziwa kwekhandlela eliqinileyo le-bearish elibeke ingqekembe kwinqanaba eliphantsi le-152 leedola. Inqanaba elikhankanyiweyo libambe kwaye uxinzelelo lweebhere alunakungena kwinqanaba elingaphantsi. Amandla enkomo abuthathaka kwaye ukonyuka kwamaxabiso kuyaphazamiseka.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSVUSD, nge-31
Ixabiso ligcina urhwebo lwalo ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwamandla e-bearish. Xa iinkunzi zenkomo zonyusa uxinzelelo lwazo, inqanaba lokumelana ne- $ 171 linokungena kwaye kunokubakho ukonyuka ukuya kuthi ga kwixabiso leedola le-198 kunye ne-217 lamaxabiso. Ukuba inqanaba lenkxaso le- $ 152 libambile, ukushukuma okuqhubekayo kunokuqhubeka, nangona kunjalo, inqanaba lenkxaso elingaphantsi kwexabiso langoku lifunyenwe kwi-152, $ 134, nakwi-115 yeedola.
I-Bitcoin SV ikwintshukumo yokuhamba kwexesha eliphakathi. Xa ixabiso lehle kwinqanaba lokuxhasa le- $ 152, iibhere zilahlekelwa ngumfutho kunye nokuhla kwexabiso okuyekisiwe. Ixabiso alikwazanga kuqhubeka nokwenzeka ngenxa yokunyanzelwa kwexabiso eliphantsi. Ixabiso liqale intshukumo yokudibanisa ngoMeyi 25 kwaye inokuqhubeka kude kubekho ukubakho.
Itshathi ye-BSVUSD 4hour, ngoMeyi 31
Ixabiso lithengiswa ngaphezulu nangaphaya kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka. Ithuba lamandla elihambelana ne-14 libonisa umqondiso we-bullish ngaphezulu kwama-40 amanqanaba. Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga iingqekembe
I-NASDAQ100 (NAS100) yehla phakathi kwamanqanaba 13000 kunye ne-14000, Ukuchasana nobuso kwinqanaba le-13800
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili14000, 14100, 14200
Imimandla yenkxaso ephambili13400, 13300, 13200
I-NASDAQ 100 (NAS100) yexesha elide: Ukuma
I-NAS100 kukunyuka okuphezulu. Isalathiso siye sajongana nokwaliwa kwinqanaba le-14000. Ukunyuka kwangoku kujongene nenqanaba lokumelana ne-13800. Kwisenzo sexabiso sangaphambili, iinkunzi zeenkomo bezingavunyelwanga kabini ngokuchasene ne-14000. Isalathiso siye salala kwinqanaba le-13000 saphinda saqala ukuya phezulu. Ixabiso lesalathiso liphule ngaphezulu komndilili wokuhambisa ucebisa ngokuqhubela phambili ukuya phezulu.
I-NAS100-Itshathi yemihla ngemihla
I-NAS100 inyuke yaya kwinqanaba lama-55 leNdawo yamandla esiNxulumeneyo kwisithuba se-14. Ibonisa ukuba isalathiso sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ixabiso lesalathiso lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukunyuka okuya phambili.
I-NASDAQ 100 (NAS100) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikukunyuka okuphezulu. Okwangoku, umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-13959.03.
NAS100 - 4 Itshathi yeYure
Isalathiso singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isalathiso sikwi-bearish umfutho. Oku kuchasene nesenzo sexabiso njengoko ixabiso lihambela phezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
Imbonakalo ngokubanzi ye-NASDAQ 100 (NAS100)
Isalathiso se-NAS100 sikukunyuka okuphezulu. I-uptrend ijongene nenkcaso engaphantsi kwenqanaba le-13800. Ukusukela ngoFebruwari, imarike ijongene nokuchasana kwinqanaba le-14000.
tags I-NAS100, I-Nasdaq 100, Uhlalutyo Technical
Ukulahlwa kobuso be-NZD / USD kwinqanaba le-0.7300 njenge-Kiwi ifumana iNkxaso apha ngasentla
I-NZD / i-USD yeXabiso kwiXesha elide leNdlela: Ukutshintsha
Ukusukela nge-28 ka-Epreli, NZD / USD kukuhamba ecaleni. Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kuFebruwari, iinkunzi zeenkomo zagxothwa kwi-28 yokumelana njengoko intengiso yenqabile ukuya kwinqanaba le-0.7300. Esi sibini senza enye inyathelo eliya phezulu kwindawo esezantsi kutshanje. Ngeli xesha, ngoMeyi 0.7212 uptrend, umzimba wekhandlela obuyiselweyo uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci 26%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kunyuka siye kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.618. I-Kiwi inokufikelela kwinqanaba eliphezulu kutshanje ukuba ukuxhathisa kwi-0.7412 kwaphuliwe.
I-Kiwi ikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba esi sibini sikummandla wonyuselo kwaye ngaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Kiwi ikwindlela esecaleni kumgangatho ongaphantsi kwe-0.7300. Ngeli xesha, ngoMeyi 26 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba intengiso iya kunyuka iye kwinqanaba 61.8 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba eliphezulu le-0.7370.
Iibini zingaphezulu kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni. Ixabiso le-Kiwi line-crossover ye-bullish njengoko iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphezulu kwe-50-day SMA.
Isibini se-NZD / se-USD siboshwe kuluhlu olungezantsi kwe-0.7300 yokuphikisa ngaphezulu. Iibini ziya kuphinda ziqhubeke ngokukhawuleza xa ukuxhathisa kwinqanaba le-0.7300 kwaphulwa. Ngaphandle koko, intshukumo ebotshelelwe kwinqanaba iya kuhlala ixesha elide.